China FOTON C8 / C9 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Foton
Refy ankapobeny 9300 * 2450 * 3050/3150 (ho an'ny C9)
Curb Weight 8.2T / 8.4T (miaraka A / C)
GVW 12.2T / 13.2T (miaraka amin'ny A / C)
Fahaizan'ny mpandeha / seza 84 / 10-37
Firafitry ny gorodona Roa-dingana / Low-teny
Fahaiza-solika 200L (Diesel) / 8 * 80L (CNG)
Natao ho an'ny tanàna kely sy salantsalany izy io, mahafeno ny filan'ny fitaterana isan-karazany toy ny làlan'ny sampana ao an-tanàna sy ny fitaterana interurban. Fomba hatsarana manavao sy manokana, tsara sy vaovao, mitarika ny fironana lamaody fitateram-bahoaka.
Headlamp eo anoloana
Rindrina eo aloha
Ny bus Foton C8 / C9 isan-tanàna dia mikendry ny hanolotra vahaolana maharitra sy mahasolo tontolo iainana ny tanàna ary hamaly ny filan'ny fitaterana an-tanàna manomboka izao hatramin'ny famolavolana ka hatramin'ny dingana famaranana, miaraka amin'ny fanomezan-danja indrindra ny faran'izay mahomby indrindra, mampitombo ny bus mandroso sy manatsara ny fitantanana fiainany farany.
Ny kompartin'ny motera dia misy fanairana amin'ny hafanana ho an'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy sy ny fitaovana famonoana tena ho fanaraha-maso ny fotoana tena izy; Ny takela-by vy dia ampiharina mba hiantohana tsara ny fiarovana ny mpamily sy ny mpandeha; Ireo fitaovana tsy mahazaka afo sy ireo fitaovana mahazaka afo misy A miaraka amina fahombiazan'ny fiarovana tsara kokoa dia ampiasaina manodidina ny loharano fanafanana anao.